Taratasy fandraisana ny mpivarotra - SuKo Polymer Machine Tech Co., Ltd.
Taratasy fandraisana ireo mpivarotra
Taratasy fanasana ho tonga mpivarotra anay
Amin'ny anaran'ny Jiangsu Sunkoo Machines Tech Co., Ltd, dia manasa anao izahay ho mpizarazara mety hitranga ao amin'ny faritra misy anao. Satria i Sunkoo dia manana traikefa manan-karena nandritra ny 12 taona mahery tamin'ny famokarana PTFE & UHMWPE milina. Mametraka fifandraisana tsara eo amin'ireo mpivarotra izahay ary manome lanja azy ireo. Ny antsipiriany momba ny fomba fanao, ny fepetra ary ny toe-javatra hahatongavanay ho mpivarotra dia hozaraina rehefa angatahina.
Ho an'ny ahiahinao bebe kokoa, eto ambany etsy ambany dia ireo masinina nanondrana anay indrindra:
Pitsopitsony / famaritana ara-teknika
PTFE Rod Extruder OD 3mm-150mm, 150mm-500mm amin'ny alàlan'ny fomba Ram Extrusion miaraka amin'ny Tolérance OD: ± 0.02mm. Manohiza extrusion amin'ny halavany tsy voafetra.
PTFE Tube Extruder OD 20mm-500mm dia manohy fitrandrahana. Fandeferana amin'ny fandeferana amin'ny rindrina: ± 0,02mm. Hatevin'ny rindrina 3-15mm, tohizo ny fitrandrahana miaraka amin'ny halavany tsy voafetra.
Masinina fanaovan-gazety fanaovan-gazety PTFE Semi-mandeha ho azy OD hatramin'ny 1000mm. Ny haavony dia miankina amin'ny takiana amin'ny fantsom-boaloboka sy tehina.
Masinina famolavolana presse PTFE Full Automatic OD hatramin'ny 100mm miaraka amin'ny haavo 100mm misy sombiny 300 isan'ora ho an'ny fantsona sy tehina.
Masinina PTFE Gasket 5mm-50mm, hatevin'ny 2mm-7mm. 1500 faradiny isan'ora
Tianay ihany koa ny manasa ireo mpivarotra anay hanamarina indroa ny tranokalanay hahafantarana bebe kokoa ny masininay.
Mihevitra ny tenanay ho sambatra izahay afaka nanatevin-daharana ny hery amin'ireo mpaninjara. Ny fanoloran-tenanay ho an'ireo mpizara dia manohy mitoetra amin'ny fanomezana tolotra tena tsara sy vidin'ny fifaninanana ho an'ny vokatra sy serivisinay. Manantena ny fiaraha-miombon'antoka ifanomezana valiny miaraka amin'ny orinasanao hatramin'ny ho avy sy indray izahay, miarahaba anao amin'ny maha-iray amin'ireo mpaninjara anay.
Raha manana fanontaniana na fanamarihana ianao dia aza misalasala mifandray aminay. Ny fotoana iray hifampiresahana bebe kokoa aminao momba ny fiaraha-miasa stratejika vaovao dia horaisina tsara.
Làlana No.5 Lvshu 3, Xuejia, Distrikan'i Xinbei, Changzhou, Jiangsu, Sina.213000.
Telefaona / WhatsApp: +8619975113419